Suuqeeyaal Job Description / Hawlaha Oo Template Duty - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Suuqeeyaal Job Description / Hawlaha Oo Template Duty
Suuqeeyaal Job Description / Hawlaha Oo Template Duty
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized 2 Comments 720 Views
Hel darsaday ama iibsadaan gudahood telefoonka ku saabsan xal ama baayacmushtarkaagii.
Job Skills Shuruudaha
Keena saamiyada dakhliga diyaar, waxbarashada ka qoraalka sharxaya adeegyada ama wax soo saarka, si uu uga dhaadhiciyo macaamiisha in ay yihiin iman kara xitaa in la sameeyo hadiyad ama si ay u iibsadaan adeegyada ama wax soo saarka.
shirkadaha Contact ama qof shakhsi by phone boodhadh dakhliga la xidhiidha wax soo saarka ama xal, ama xitaa si ay u codsadaan deeqaha loogu talagalay sadaqada.
Sharax weydiimaha reply ka macaamiisha, iyo adeegyada iyo heerka ama alaabta.
Hel macluumaad macmiilka sida brand, xamili, iyo habka bixinta , oo wuxuu soo geli codsiyada galay kombiyuutarada.
Responses ee rajada, faahfaahinta, qaniimooyin, iyo record sumadaha xiriiray.
Dheellitir barnaamijyada iibka damacyo kiciyey beegsaday iyo baahida dadka waawayn gaar ah.
Gaadhi magacyada iyo telefoon kala duwan ee macaamiisha laga helay ilo sida goobaha telefoonka, Kaararka jawaab wargeys ka soo shirkadaha in ay ahaayeen kala duwan iibsaday.
taleefan oo Jawaab ka macaamiisha la filayo kuwaas oo la baryo iyada oo commercials.
Phone ama erayo koobanahay in fal xiriir ka iibsada ama xataa in la raaco-up isbarteen iibka ugu horeysay.
Hayso xogta ah oo shurako ah, wararka, iyo tilmaamo.
booqashooyinka caadiga ah ee ku saabsan wakiilada iibka si ay u qanciso macaamiisha filayo ama ku saabsan macaamiisha in ay sugaan soo bandhigay dakhliga.
Industry ama sameeyo sahan macmiilka si aad u hesho macluumaadka ku saabsan macaamiisha la filayo.
Shaqo raad Baahan
Akhrinta Aqoonta-fahamka nuxurka ku qoran iyo cutubyada in waraaqaha la xiriira shaqada.
Active-Dhageeysi-To waxa ay dadka kale caddayn bixiya dhamaystiran dareenka,, iyadoo la isticmaalayo waqti aad u fahmaan waxyaabaha la dhisay, codsanaya weydiimo sida fiican, halkii mesmerizing at jeer in ay yihiin sax ahayn.
Daabacaadda-In qoraal ma aha sida aan habboonayn ee rabitaanka dadkii badnaa wax ku ool ah ku hadla,.
Ka hadalka-hadalka dadka kale si ay u wadaagaan xaqiiqada si guul leh.
Xisaabta-Kafaa'iidaysiga xisaabta si ay u xalliyaan masalooyin.
Hababka Science-Isticmaalka iyo xeerarka farsamada si ay u xaliyaan dhibaatooyinka.
Criticalthinking-Isticmaalka sababaynta iyo ku fikiray in la aqoonsado ayna duleella iyo faa'iidooyinka xalalka kale, gunaanad ama hababka dhibaatooyin.
Active Learning-fahmo muhiimadda ay faahfaahin cusub oo ku saabsan labada jira iyo dhibaatada mustaqbalka xalinta iyo go'aan-qaadasho.
Barashada Xeeladaha-Kafaa'iidaysiga oo gaaray habab teachingANDtutorial iyo geedi socodka haboona xaaladda bara ama marka fahamka arrimo ay cusub.
Hubinta-MonitoringPERDetermining waxtarka naftaada, akhyaarey kale, ama ururrada ka fiirsan talaabooyinka sixidda ama in ay curiyaan horumarka.
Social Perceptiveness-ka foojignaatid kuwa kale’ jawaabaha sababta oo ah waxay sameeyaan sababta ay fal iyo waxgarasho.
falalka Coordination-Beddelidda la xiriira kuwa kale’ dhaqanka.
Suuq-qanciyo dadka kale in ay madaxooda iyagoo leh ama dhaqanka ka beddelaan.
Dejinta-Siinta kuwa kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanaansho.
qaar kalena bara-wacyi galiyo sida ay talaabo ka qaado.
Orientation-firfircoon Service raadinayaan habab si ay u taageeraan shakhsiyaadka.
Advanced Lagu Xallinayo Dhibaatada-Go'aaminta arrimaha sare iyo dib u macluumaadka khuseeya si ay u horumariyaan oo ka fiirso fursadaha iyo codsan fursadaha.
shuruudaha iyo shuruudaha wax soo saarka Nidaamka Qiimaynta-barashada si loo abuuro design a.
qalabka Technology Design-Sameynta ama samaynta iyo teknoolajiyada si ay u shaqeeyaan user doonayo.
Gear Selection-Go'aansiga nooca qalab iyo qalabka loo baahan yahay si dhab ah si ay u fuliyaan shaqo.
taararka wajigeeda-rakibidda, daydo, qalabka, ama ay qorshaynayso in ay la kulmaan Details.
Barnaamij-saaridda baakadaha computer ujeeddo in tiro badan yihiin.
Operation Tracking-Daawashada calaamado kale, dials, ama imtixaanka si loo hubiyo in ay jirto qalab ah oo ku haboon oo shaqeeya.
Habka iyo Maamul-hortagga hawlaha qalabka ama qalabka.
Qalabka Dayactirka-Sameynta adeegyada waa caadiga ah ee marsho iyo go'aan goorta iyo nooca adeegyada lagama maarmaan noqon doonaan.
sababo dhib-Go'aaminta khaladaadka shaqada iyo go'aan ka waxa jihada si ay u tagaan oo ku saabsan.
Doonnida-Daboolid qalabka ama qalabka la isticmaalayo alaabta loo baahan yahay.
qiimaynta iyo qiimaynta waxyaabaha Quality Control Imtixaan-Samaynta, adeegyada, ama hawlgallada ay ku xukumi tayada ama qaab.
Xukun iyo Go'aan-qaadashada-ka fikirto kharashka guud iyo faa'iidooyinka hawlaha kuwa ka iman kara in la doorto mid ka mid ah in uu yahay ugu haboon.
Systems Falanqaynta-go'aansado waxa sort of habka waa shaqeeyaan iyo sida isbeddel ah ee hawlaha, nno, iyo sidoo kale xaafada saamayn karaa natiijada.
hababka ama signalada waxqabadka nidaamka iyo sidoo kale dhaqanka loo baahan yahay si kor loogu qaado ama hufnaan sax Systems Falanqaynta-Aqoonsiga, iyadoo la raacayo oo gaashaan oo mashiin ah.
Timemanagement-Maareynta ka mid ah ayaa munaasabadda u gaar ah oo munaasabadda dadka kale.
Maamulka Savings-Go'aansiga sida ugu dhakhsaha badan oo doolar lagu bixin doonaa si ay u helaan shaqo lagu sameeyey, iyo iibka, waayo kharashka kuwan.
Management of Content Methods-In qofka oo arkaya isticmaalka saxda ah ee muuqaalada, qalabka, iyo qalabka si dhab ah loo baahan yahay in la sameeyo shaqo gaar ah.
shakhsiyaadka Maamulka Shaqaalaha Resources-Leading sababtoo ah waxay, horumarinta, iyo shaqada u Waxyoon, kala ah dadka ugu hawsha.
Qualification tababarka Qualification Experience
Heerka High-School (ama GED ama High School Certificate isu-)
In ka yar shahaado dugsi sare
Barnaamijyada College Qaar badan
Job Authority Skills Qualification
AchievementOREffort – 90.15%
Determination – 89.30%
Initiative – 87.28%
Authority – 81.76%
Iskaashiga – 88.10%
Issue for Qaar kale – 78.46%
Sinaanta Bulshada – 76.31%
Is-Control – 85.22%
Dulqaadanayn Stress – 92.55%
CustomizationANDVersatility – 93.72%
hallayn – 93.93%
Focus on Aragti – 93.27%
halaynta – 94.09%
Liberty – 87.65%
Advancement – 81.96%
Adoo ka fakaraya Analytical – 83.43%
Pingback: Working In Call Centers — Fat Loss The Hardest Jobs In This Field?
Pingback: Would You Like A Job Where With Steady Internet To Stay? | | dhulka hoostiisa